Boxe Française Savate: misy ady mangatsiaka eo amin’Analamanga sy ny federasiona | NewsMada
Boxe Française Savate: misy ady mangatsiaka eo amin’Analamanga sy ny federasiona
Tsy mitovy fomba fijery ihany koa ny ligin’Analamanga sy ny federasiona malagasin’ny boxe française savate, ankehitriny. Mahatsiaro ho voailika sy atao anjorom-bala Analamanga ka mangataka fanazavana.
Niatrika ny fivoriambe tsy ara-potoana, tetsy amin’ny ANS Ampefiloha, ny asabotsy lasa teo, ny ligin’Analamanga, taranja boxe française savate. Tamin’izany no nanehoan’ireo klioba sy ny mpitantana eo anivon’ny ligy ny alahelony, ny amin’ny fihetsiky ny federasiona. Mahatsiaro ho ataon’ny federasiona ankilabao, ny ligin’Analamanga. Anisan’ny hisian’ny olana, ny tsy fandehanana, niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, farany teo. “Tsy fantatra intsony ny marina, avy amin’ny federasiona satria miovaova be hatrany ny teny lazain’izy ireo. Hafa ny ambarany amin’ireo atleta, hafa kosa ny lazainy, amin’ny gazety” hoy Rakotovao Haritiana, filohan’ny ligin’Analamanga. Anisan’ny nampitaraina ny ligy, ny tsy mba fanomezana fanazavana mahakasika ny tsy nandehanana fa dia amin’ny alalan’ny gazety sy ny haino aman-jery, no alalan’izy ireo, ny antony. “Efa lany andro, tamin’ny fampivondronana, ny atletanay ary nisy mihitsy ireo namoy ny fanadinana, nefa dia noravaina maina fotsiny”, hoy hatrany ny mpitantana an’Analamanga. Taty aoriana aza, dia tsy niantso ny ligin’Analamanga intsony ny federasiona rehefa manao atrikasa, araka ny fanamarihany. Manoloana izany, mangataka fanazavana sy fifampiresahana mivantana amin’ny federasiona ny ligin’Analamanga.
Notapahin’ireo klioba sy ny komity mpitantana eo anivon’ny ligin’ny boxe française savate Analamanga, fa hankasitraka ireo olona nahavita be, tamin’ity taranja ity izy ireo. Tsy ankanavaka izany fa na mpitantana, na atleta, na mpanazatra na mpitsara, dia samy hotolorana mari-pankasitrahana avokoa. Mandritra ny «Grand combat», hatao ny volana oktobra, ho avy izao, izay hanasana mpikatroka avy any ivelany sy ireo ligim-paritra ary haiady hafa no hanolorana izany. Ankoatra izay, ho feno tanteraka ny fandaharam-potoan’ny ligy, ho an’ity enim-bolana farany ity. Anisan’izany ny fanomezana fiofanana ho an’ireo mpitsara ka natokana ho an’ireo ankizy, 12 ka hatramin’ny 17 taona. Hitsara ireo ady hatao ny volana oktobra, izy ireo, aorian’io fiofanana io. Hanakatonana ny taom-pilalaovana ny “combat inter-section”, ny volana novambra, izao.